ရေနွေးငွေ့ကို REINSTALL လုပ်ဖို့ဘယ်လို - ရနှေးငှေ့ - 2019
အလိုထုတ်လုပ်သူအဖြစ်လုပ်ကိုင်ဖို့ပြည်တွင်းရေးလက်ပ်တော့ကိရိယာ, သင်မောင်းသူကို install လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူ့ကိုနှင့်အသုံးပြုသူတစ်ဦး Full-အလုပ်လုပ် Wi-Fi ကို adapter ရရှိသွားတဲ့။ မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်
W-Fi ကို adapter ကားမောင်းသူက Intel WiMax Link ကို 5150 ဘို့ installation ရွေးချယ်မှု
ကိုယ့်အရှိဆုံးအဆင်ပြေရွေးချယ်ဖို့ရှိသည်, ကျနော်တို့အသေးစိတ်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကိုဆွေးနွေးကြလိမ့်မည်သည့် Intel က WiMax Link ကို 5150. များအတွက်ယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။
Method ကို 1: တရားဝင်က်ဘ်ဆိုက်
ပထမဦးဆုံးအ option ကိုတရားဝင်က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ရပါမည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ထုတ်လုပ်သူမဟုတ်မှသာထုတ်ကုန်များအတွက်အများဆုံးထောက်ခံမှုပေးစနစ်ထိခိုက်စေမည်မဟုတ်ကြောင်းလိုအပ်သောဒရိုင်ဘာနှင့်အတူအသုံးပြုသူပေးနိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်နေဆဲညာဖက် software ကိုတွေ့ရှိရန်အလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအရာဒီတော့ - Intel ရဲ့ site ကိုသွားပါ
ဆိုက်၏ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်ခလုတ်တစ်ခုရှိပါတယ် "ပံ့ပိုးမှု"။ ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
ထို့နောက်ကျွန်တော်အတူတူပင်ထောက်ခံမှုအတွက်ရွေးချယ်စရာများနဲ့ window ကိုရယူပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာသတင်းစာဖြစ်လျှင်, Wi-Fi ကို adapter များအတွက်ယာဉ်မောင်းလိုအပ်ပါတယ်ကတည်းက "Downloads နှင့်ယာဉ်မောင်း".
နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရှာဖွေရေးကိုဆက်လက်အလိုအလြောကျသို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်သင့်လျော်သောယာဉ်မောင်းကိုရှာဖွေဆိုက်ကနေတစ်ဦးကမ်းလှမ်းမှုရ။ ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ကြာမြင့်စွာကျနော်တို့မလိုအပ်ပါဘူးအဖြစ်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ပူဇော်မပြုခဲ့ကြောင်း, အဆုံးစွန်သောရက်နေ့တွင်သဘောတူသည်။
ကျနော်တို့ device ကိုအပြည့်အဝနာမကိုသိကတည်းကအများဆုံးယုတ္တိတိုက်ရိုက်ရှာဖွေရေးသုံးစွဲဖို့။ ဒါဟာအလွန်အလယ်ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည်။
မိတ်ဆက်ပေး "Intel က WiMax Link ကို 5150"။ သို့သော်ထို site ကိုအသင်အလွယ်တကူပျောက်ဆုံးသွားရနိုင်ပြီးသင်လိုအပ်သောအရာကိုဒေါင်းလုဒ်မဆွဲကြဘူးပရိုဂရမ်၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ခဲ့သည် "မဆို operating system ကို"64 bit မှာ - ဥပမာအားဖြင့်, Windows7တွင်။ ဒီတော့ရှာဖွေရေးသိသိသာသာပတ်နှင့်အများကြီးပိုလွယ်သည်ဒရိုင်ဘာကို select ကျဉ်းသည်။
လာမယ့်စာမျက်နှာကိုသွားပါ, ဖိုင်ကိုအမည်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ သင်မော်ကွန်းတင်ပြီးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ပိုနှစ်သက်လျှင်, သင်ဒုတိယ option ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ သို့သျောလညျးက extension ကို EXE နှင့်အတူဖိုင်တစ်ခုဒေါင်းလုပ်လုပ် သာ. ကောင်း၏။
လိုင်စင်သဘောတူညီချက်လက်ခံနှင့်ဒေါင်းလုဒ်ဖိုင်ကို install လုပ်ပြီးနောက်, သငျသညျက၎င်း၏ပစ်လွှတ်နှင့်အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။
ငါတို့မြင်ပထမဦးဆုံးအရာ - welcome screen တစ်ခု။ သငျသညျလုံခြုံစွာနှိပ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အပေါ်ပြန်ကြားရေး, မလိုအပ်ပါ "Next ကို".
အဆိုပါ utility ကိုအလိုအလျောက်လက်ပ်တော့ပေါ်မှာဤပစ္စည်းကရိယာ၏ရှေ့မှောက်တွင် check လုပ်ပေးပါတယ်။ ကားမောင်းသူ downloads, device ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိပါလျှင်ပင်ဆက်လက်နိုင်ပါသည်။
ထိုနောက်မှငါတို့သည်နောက်တဖန်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်ဖတ်နေစာနယ်ဇင်းအကြံပြု "Next ကို"ယခင်ကသဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
Next ကိုကျနော်တို့ဖိုင်ကိုတပ်ဆင်ရန်အရပျကိုရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာစနစ်တစ်ခု disk ကိုရွေးချယ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ စာနယ်ဇင်းများ "Next ကို".
ဒါဟာသင်ကွန်ပျူတာ reboot ပေးရမည်ဖြစ်သောပြီးနောက်တင်, စတင်ခဲ့သည်။
ဤနည်းလမ်းကိုကျော်ယာဉ်မောင်းဒေတာ setting ။
Method ကို 2: တရားဝင် utility ကို
laptop များနှင့်ကွန်ပျူတာတွေအတွက် devices များလုံးဝနီးပါးတိုင်းထုတ်လုပ်သူယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်ရန်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် utility ကိုရှိပါတယ်။ ဒါဟာအသုံးပြုသူနှင့်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံးအတွက်အလွန်အဆင်ပြေသည်။
Windows7ကိုအပျေါက Intel WiMax Link ကို 5150 များအတွက်ယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်ရန်အထူး tool ကိုသုံးစွဲဖို့, ထုတ်လုပ်သူ၏တရားဝင် site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။
ခလုတ်ကိုတွန်း "Upload လုပ်ပါ".
installation ချက်ချင်းအရပ်ဌာနကြာပါသည်။ ဖိုင်ကို run ခြင်းနှင့်လိုင်စင်အခြေအနေများနှင့်အတူသဘောတူသည်။
utility တပ်ဆင်ခြင်းအော်တို mode မှာထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်, ဒီတော့သာစောင့်ဆိုင်းနိုင်ပါတယ်။ installation လုပ်ငန်းစဉ်ကို၏ကွပ်မျက်စဉ်အတွင်းမစိုးရိမ်ပါ, အစားထိုးအနက်ရောင်သေတ္တာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်, ဒီ application ကိုလိုအပ်သည်။
installation ကိုပြည့်စုံပင်ဖြစ်သည်ပြီးနောက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရပါလိမ့်မယ်: ကိုချွတ် run သို့မဟုတ်။ ယာဉ်မောင်းနေဆဲ updated မဟုတ်ပါ ခုနှစ်မှစ. , ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ utility ကို run နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ကိုစတင်ပါ။
ကျနော်တို့ယာဉ်မောင်းယခုအချိန်တွင်ပျောက်နေသောအရာကိုကြည့်ရှုရန်မှတ်စုစာအုပ် scan ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ဒီအခွင့်အလမ်းကိုယူပြီးကျနော်တို့ကိုနှိပ် "Start ကိုစကင်".
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းပစ္စည်းတွေရှိပြီးသို့မဟုတ်မိမိတို့၏ system ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်များနှင့်အမှန်တကယ် software ကို install လုပ်ရန်သင့်အားတောင်းလာလိမ့်မယ်လိုလျှင်။ ကျနော်တို့ရုံက directory နှင့်စာနယ်ဇင်းသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ် "ဒေါင်းလုပ်".
သငျသညျတင်ပေးမှုပြီးဆုံးတဲ့အခါကားမောင်းသူကဒီပြီးရင်တော့ install လုပ်ရပါမည် "Install".
ပြီးစီးအပေါ်သို့ကျနော်တို့ကွန်ပျူတာကို restart ပြန်လုပ်ဖို့ပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ချက်ချင်းလုပ်များနှင့်ကွန်ပျူတာအပြည့်အဝလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပျော်မွေ့။
Method ကို 3: drivers တွေကို install လုပ်ဖို့အစီအစဉ်
အဆိုပါယာဉ်မောင်းကို install လုပ်ဖို့, အလွတ်သဘောအစီအစဉ်ကိုရှိပါတယ်။ ထို့ပြင်များစွာသောအသုံးပြုသူများကပိုပြီးသန့်စင်ပြီးနှင့်ခေတ်မီထိုကဲ့သို့သောဆော့ဖ်ဝဲကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား, သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့ preference ကိုပေးလေ့ရှိသည်။ သင်တို့သည်ဤအစီအစဉ်များ၏ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူပိုကောင်းကြှမျးဝငျရချင်တယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့အသီးအသီးအစီအစဉ်ကိုဖော်ပြထားသည့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးဖတ်အကြံပြုပါသည်။
အတော်များများက DriverPack Solution အမောင်းသူကို update ဖို့အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်ကိုယုံကြည်ပါတယ်။ ဤလျှောက်လွှာ၏အခြေစိုက်စခန်းအဆက်မပြတ်ဆို devices များနှင့်အတူက timeless အောင် updated ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်ပြန်လည်သုံးသပ် software ကိုအတူအပြန်အလှန်အပေါ်အသေးစိတ်သင်ခန်းစာလည်းမရှိ။
သင်ခန်းစာကိုဘယ်လို DriverPack Solution ကိုအသုံးပြုပြီးကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ယာဉ်မောင်းကို update လုပ်ဖို့
Method ကို 4: device ကို ID ကိုမှတဆင့် drivers တွေကို Download
တစ်ခုချင်းစီကို device ကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ID ကိုရှိပါတယ်။ ဒါကညာဘက်ဒရိုင်ဘာရှာဖှနှင့်အတူသငျသညျကိုကူညီနိုင်မယ့်ထူးခြားတဲ့အမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း ID အတှကျ Intel က WiMax Link ကို 5150 ကြည့်:
ဤသည်တပ်ဆင်ခနည်းလမ်းအလွယ်ကူဆုံးကားမောင်းသူဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရှာဖွေရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးအထူးသစကားပြောရန်အနည်းဆုံးလျှင်။ ရွေးဖို့တစ်ခုခုလိုအပ်, ဒါမှမဟုတ်ရှေးခယျြမပို utilities ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်မလိုပါ။ အထူးဝန်ဆောင်မှုများကိုသင်တို့အဘို့ရှိသမျှကိုအလုပ်လုပ်ပါ။ စကားမစပ်, ငါတို့၏ website စနစ်တကျသာထူးခြားတဲ့ device ကိုအရေအတွက်ကို သိ. , ဆော့ဖ်ဝဲရှာဖွေဖို့ဘယ်လိုပေါ်အသေးစိတ်သင်ခန်းစာရှိပါတယ်။
သင်ခန်းစာကို: ဟာ့ဒ်ဝဲ ID အတှကျ drivers တွေကိုရှာရန်
Method ကို 5: အဆိုပါ Windows ကိုယာဉ်မောင်းရှာရန်
ပင် utilities install ဖော်ပြခြင်းမတစ်ဦးအလည်အပတ် Third-party က်ဘ်ဆိုက်များမလိုအပ်ပါဘူးရသောအခြားသောလမ်းရှိပါသည်။ အားလုံးလုပျထုံးလုပျနညျးကို Windows ဖွငျ့ဖျြော, ဒါပေမယ့် (ပြီးသားမရရှိနိုင်လျှင်, သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာက) နည်းလမ်း၏အနှစ်သာရ OS ကိုရုံကွန်ယက်ပေါ်တွင်ကားမောင်းသူဖိုင်တွေရှာဖွေနေကြောင်းဖြစ်တယ်, တွေ့ရှိခဲ့လျှင်သူတို့ကိုတပ်ဆင်ပြီးနေကြသည်။
သင်ခန်းစာကို: standard Windows ကိရိယာတွေသုံးပြီး drivers တွေကို install လုပ်ခြင်း။
သင်ဤနည်းလမ်းကိုသုံးစွဲဖို့တစ်ဦးအလိုဆန္ဒရှိပါက, ထို့နောက်အထက်ပါ link ကို click နှိပ်ပြီးနှင့်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်ကိုဖတ်ပါ။ ဤသူသည်သင်တို့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်မကူညီဘူးလျှင်, ယခင်လေးခု mounting ရွေးချယ်စရာရည်ညွှန်း။
ကျနော်တို့ကျနော်တို့အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်များနှင့်အတူသင်ဤတာဝန်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်အဆိုပါ Intel က WiMax Link ကို 5150. များအတွက်ယာဉ်မောင်းကို install အပေါငျးတို့သဖြစ်နိုင်သောနည်းလမ်းများကိုဖော်ပြပါ။